ရှမ်း[သျှမ်း]သမိုင်း နှင့် ရှမ်း[သျှမ်း]လူမျိုးအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ရှမ်း[သျှမ်း]သမိုင်း နှင့် ရှမ်း[သျှမ်း]လူမျိုးအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
Writen by ဇောင်း 4:58:00 PM -0Comments
တာချီလိတ်မြို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် တည်ရှိသောကြောင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြရာတွင် ယခုတင်ပြမည့် အချက်အလက်မှာ တိုင်းရင်းသားအများစုမှာမှ ရှမ်း(သျှမ်း) လူမျိုးအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ တာချီလိတ်မြို့တွင် နေထိုင်သူဦးရေ အများဆုံးမှာ ရှမ်း(သျှမ်း)လူမျိုး ဖြစ်ပြီး၊ အခါလူမျိုးနှင့် လားဟူ လူမျိုးတို့သည်လည်း တာချီလ်ိတ်တွင် အများအပြားနေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။
ရှမ်းလူမျိုးတို့မှာ နန်ကျောက် (နန်ကျောင်းဟုလည်း အရေးအသားရှိ) အနွယ်ဝင်(ရှမ်း-တိုင်း Tai)များဖြစ်သည်။ အေဒီ ၉ရာစုအစဦးတွင် တရုတ်ထန်မင်းဆက်၏ တန်းခိုးထွားလာမှုအောက်တွင် နန်ကျောက်ပြည်ကြီး (ယခုယူနန်ပြည်နယ်၊ တာလီဒေသ) ပြိုလဲပြီး အင်အားနည်းပါသွားခဲ့ရသည်။သို့သော် အလုံးစုံပျက်စီးသွားသည်ဟုမဆိုနိုင်ဘဲ ထန်မင်းဆက်ကုန်၍ စုန်မင်းဆက် လက်ထက်ထိတိုင် ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့သေးသည်။ တရုတ်ပြည်ကို မွန်ဂို(တာတာ)တို့က ၁၁ ရာစုတွင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး နယ်ပယ်များ ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခဲ့ရာ ၄င်း ရှမ်း-တိုင်း တို့ကိုလည်း အလွတ်မပေးခဲ့ချေ။ ထိုသို့မွန်ဂိုတို့ရန်ကြောင့် လူမျိုးစုကြီးပြိုကွဲသည့် ရလာဒ်အဖြစ်တောင်ဖက်တစ်လျှောက် စုန်ဆင်းအခြေချခဲ့ရာမှ ရှမ်းလူမျိုးအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ရှမ်းလူမျိုးများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လာအိုနိုင်ငံတွင် လော(မှုန်း)လူမျိုးများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်းလူမျိုးများ အဖြစ်လည်းကောင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ရှမ်းလူမျိုးများမှာလည်း ကချင်လူမျိုးများကဲ့သို့ပင် တောတောင်ထူထပ်သည့် ဒေသတွင် အခြေချခဲ့ကြသည့်အတွက် လူမျိုးစုငယ်အများအပြား ကွဲပြားခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားတို့ပါ အနည်းငယ်စီကွဲပြားကြသည်။
ရှမ်းတို့ဌာနီ၌ ပြည်နယ်ပေါင်းမှာ တေတ္တံသ ခေါ် ၃၃-နယ်ရှိ၍ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်အလားမွေ့လျော် ပျော်ရွှင်ဘွယ် များစွာတို့နှင့် ပြည့်စုံသည့်ပြင် စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၅၆၆၄၅-ကျယ်လျက် စော်ဘွား ၁၆-ယောက်၊ မြို့စား ၁၃-ယောက်နှင့် ငွေခွန်မှူး ၄-ယောက်တို့က အုပ်ချုပ်ကြရသည်။
ပြည်နယ်၏မြ်ို့တော် မှာတောင်ကြီးမြို့ဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကို အပိုင်းကြီးသုံးပိုင်းဖြင့် ခွဲခြားထားသည်၊
တရုတ်၊ လာအိုနှင့်ထိုင်း နယ်စပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒေသများတွင် နေထိုင်သော ရှမ်းလူမျိုးများသည် မြန်မာပြီးလျှင် ဒုတိယအများဆုံး လူမျိုးစု ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၄ သန်းကျော် နေထိုင်ပြီး လူမျိုးစု ၃၅ စုပါဝင်နေထိုင်သည်။ ရှမ်းအမျိုးသားများသည် ပင်နီရင်စေ့ တိုက်ပုံကို ခပ်ပွပွဘောင်းဘီရှည်နှင့် တွဲဖက်ဝင် ဆင်ပြီး ခါးတွင် ပုဝါစစည်းနှောင်းလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကော်လာမဲ့ ရင်ဖုံးလက်ရှည်အင်္ကျီကိုပတ် လည်စင်းပါသော ရိုးရာလုံချည်နှင့် တွဲဖက်ဝင်ဆင်သည်။ အင်းလေး၊ ပင်းတယဒေသများ အပါအ၀င် အပန်း ဖြေလေ့လာရန် ဒေသများစွာ ရှိသည်။
ရှမ်းလူမျိုးတို့သည် အဓိကအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များမှာ သစ်၊ လက်ဖက်၊ စပါး၊ လိမ္မော်၊ ပြောင်း၊ ရာဘာ၊ နှင့် ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးလျက်ရှိကာ လက်မှုအတတ်ပညာများစွာကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကာ နေထိုင်ကြသည်။
ရှမ်းလူမျိုးတို့ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု နှင့်ပက်သက်၍ အချို့က ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့် စုန်း၊ တစ္ဆေ၊ ကဝေ စသော မိစ္ဆာ အယူဝါဒ ထွန်းကားသည်ဟု လွဲမှားစွာ ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာ ဗုဒ္စဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်.။ ရှမ်းတို့အိမ်တွင် ဘုရားစင်သာရှိသည်။ နတ်စင်မရှိ။ ဗုဒ္စဘာသာဝင် ရှမ်းအမျိုးသား မှန်သမျှဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ တနှစ်တကြိမ်ကျ ရွာစောင့်နတ်၊ လယ်စောင့်နတ်၊ သမ္မဒေ၀ါ နတ်များအား ပူဇော်မှုလောက်သာ ရှိကြသည်။ သို့တော် ထုံးစံမျှသာဖြစ်ပြီး.ကြီးကျယ် ခမ်းနားစွာ. နတ်ပွဲကြီးများ ကျင်းပခြင်းများ မရှိပေ။ ဘုရင့်နောင်လက်ထက်တွင် စော်ဘွားတို့သေလျှင် ချစ်သောကျွန်၊ စီးသော ဆင်၊ မြင်း တို့ကိုသတ်ပြီး ဂူသွင်းသော အကျင့်ကို တားမြစ်လိုက်သည်။ ဘုရင့်နောင်သည် ရှမ်းလိုမျိုးတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်ဖြစ်ထွန်းစေသော သူမဟုတ် ရှမ်းပြည်ကို ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္စဘာသာ စည်ပင်ပြန့်ပွားအောင် လုပ်ခဲ့သောသူ၊ စော်ဘွားတို့သေလျှင် ချစ်သော ကျွန်၊ စီးသော ဆင် ၊ မြင်း. စသည်တို့ကိုသတ်ပြီး အတူမြုပ်သော အကျင့်၊ အယူစဆိုးများကို ပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသော သူတယောက်ဆိုလျှင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်..။
ရှမ်းလူမျိုးများက မိမိတို့သည် ဂေါတမဘုရား လက်ထက်ကပင် ဘုရားကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်က ကောသမ္ဗီဘုရင် ဥတေနသည် ရှမ်းဘုရင်တပါးဖြစ်သည်ဟု မောရှမ်းရာဇ၀င်နှင့် သိန္နီရာဇ၀င်တို့က ဆိုသည်။ “မိုင်းမောဝ်” ဟုခေါ်သော မောရှမ်းပြည်သည်.. ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း ဒေသဖြစ်သည် ။ ထိုဒေသတွင် သာသနာနဲ့ ပက်သက်သော သမိုင်းဝင် အထောက်ထားများအနေဖြင့်..........
ကောသမ္ဗီသူဌေးကြီး ယောသက လှူဒါန်းထားသော ယောသိကာရုံေ ကျာင်းဟောင်းနေရာ (ရှမ်းစကားအရ “လွယ်ကျောင်းဆိုင်” ဟုခေါ်ပြီး တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် ရွှေလီမြစ်၏ တရုတ်ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၂၊၅ ၊၂၀၀၁ တွင်ကျမ်းပြုသူ ထိုနေရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီး စေတီဟောင်းတဆူတွင် ရှေးဟောင်း ရွှေငွေ ကြေး မြေ ဆင်းတုတော် များစွာ တူဖော်ရရှိ၏)
ဥတေနမင်း၏ သချို င်္င်းအုတ်ဂူ။
လွယ်ကျောင်းဆိုင် တောင်ခြေရှီ ဥတေန မင်း၏ ဆင်ချည်ကျောက်တိုင်။
စသည်တို့သည် ယခုတိုင် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ရွှေလီမြစ်ဒေသ (တရုတ်ပြည်) တွင် တည်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်.။
လောဝ်သမိုင်း တစ်စောင်၌ ရှမ်းလူမျိုးတို့သည် သာသနာတော် ၆၁၂ (အေဒီ၆၉)ခုနှစ် အိုက်လောဝ် မင်းဆက်ဖြစ်သော နောင်ချယ် (ခေါ်) နန်ချောင်ဘုရင် ခွန်လိမောဝ် လက်ထက်တွက် ဗုဒ္ဓဘာသနာတော်ကို စတင် သက်ဝင်ယုံကြည်သည်ဟု ဆိုသည်..။ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဟန်မင်းဆက် ဘုရင် ခေမင်တီထံမှ ရရှိလာသည် ဟုဆိုသည်။
ရှမ်းလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ နှင့် ရိုးရာအသုံးအဆောင်
[ဟော်စောင့်ဓါးပါ.. အရွယ်သိအောင် ရှမ်းဓါးနဲ့ ယှဉ်ပြထားပါတယ်...
၇ ပေကျော်ကျော်ရှည်ပါတယ် လူတရပ်ထက်မြင့်ပါတယ်.. ]
သျှမ်းများသည် ဓါးအမျိုးမျိုး၊ ပုံအဖုံဖုံ၊ အရွယ်အစား သူ့နေရာနှင့်သူခွဲခြား၍ ဓါးများသုံးစွဲလာခဲ့ရလေရာ နှစ်ပေါင်းပရိစ္ဆေဒကြာညောင်းခဲ့ပေပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှ
အကြမ်းသုံးသည့် သစ်ခုတ် ဝါးခုတ်၊ ထင်းခွေ၊ ခုတ်ထစ်ပိုင်းဖြတ်သော အခါ သျှမ်းအခေါ် ဖလုံ၊ ဖငက်၊ ဖဟတ်၊ ဖအွန် စသော ဓါးမကြီး၊ ဓါးမလတ်၊ ဓါးမငယ် အသီးသီးဖြင့်လည်းကောင်း၊
လယ်ယာခြံမြေလုပ်ငန်းခွင်များ တောတောင်လျှိုမြောင်၊ သစ်ပင်ခြုံနွယ်များ သုတ်သင်ရှင်းလင်းသော အခါ သျှမ်းအခေါ် ဖဝိုင်း၊ ဖယောင်း၊ ဖတီတဲ၊ ဖတီငေါက် စသော ဓါးရှည်ဓါးမကောက်၊ မကြီးမငယ်အလတ်လတ် အရွယ်ဓါးများဖြင့်လည်းကောင်း၊
အိမ်တွင်းအိမ်ပြင် အနီးအနား လုပ်ငန်းများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နှီးစိတ်နှီးချောနှင့် ပေါ့ပါးသောလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ရှမ်းအခေါ် ဖဝိုင်း၊ ဖအွန်၊ ဖဝစ်၊ မစ်အွန် စသော ဓါးမြောင် အမျိုးမျိုးဖြင့်လည်းကောင်း၊
မီးဖိုချောင်သုံး ဟင်းသီး၊ ဟင်းလျှာ၊ အာလူး၊ ကြက်သွန် များလှီးဖြတ်ခွဲစိတ်ရန် သျှမ်းအခေါ် မိတ်အွန်၊ ဖအွန် စသော ဓါးမြောင်၊ ဓါးလှီးဓါးများဖြင့်လည်းကောင်း၊
ထိုမှတပါး အခြားလူ့အသုံးအဆာင်အဖြစ် သျှမ်းအမျိုးသားများ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော သျှမ်းအခေါ် လျောင်းယောင်း၊ မစ်အွန်၊ မစ်ဟွန်၊ မစ်ပေါက် စသောဓါးလွယ်အရွယ်အမျိုးမျိုးဖြင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး ဈေးသွားဈေးပြန်၊ ပွဲလန်းသဘင်ဆင်ယင် ကျင်းပရာသို့ သွားသည့်အခါ သျှမ်းအမျိုးသားများ၏ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုအပါအဝင် ပုခုံးလွယ်၊ ခါးချိတ်သည့် ဓါးများဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဓါးသိုင်းကရာတွင် ဓါးလွယ်များပင် သုံးကြသည်။
(၆) လက်သမား၊ ပန်းပု ပန်းဘဲ၊ ပန်းထိမ် သုံးသည့် ဓါးအရွယ်အမျိုးမျိုး ပုံအမျိုးမျိုးဖြင့်လည်းကောင်း ရှိကြပေသည်။
“ရှမ်းအိုစည် အတို အရှည်”
[ဒါကတော့ ကွမ်ထွမ့် လို့ခေါ်သည်... (ရှမ်းလိုရေးထားလို့ အသံထွက်တော့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး သီးခံဖတ်ကြပါ)]
[ဒါကတော့ ရှေးယခင်က မောရှမ်းတွေတီးတဲ့ ရှမ်းအိုးစည်ပါ ဓနုအိုးစည်နဲ့ဆင်သည်...ဒါပေမဲ့အဝပိုကျယ်ပါသည်... ကြည့်ရင်သိသာသည်၊ နောက်ပိုင်းမလုပ်တော့ပါ၊.. သစ်လုံးကြီးကြီးနဲ့လုပ်ရလို့ဖြစ်သည်....]
[ဒါကတော့ ဆစ်ဆောင်ပန်းနား ဖက်ကတီးတဲ့ အိုးစည်ပါ ... ဗမာ ရွှေအိုးစည်နဲ့ တော့ဆင်ပါသည်... ဒါပေမဲ့ မတူပါ၊ အရွယ်အစားရော ပုံစံပါ အနည်းငယ်ကွာသည်]
[ရှမ်းအမျိုးသားဆောင်း ခမောက်ပါ...အချင်း ၂ ပေ ၃ လက်မ လောက်ရှိပါသည်....]
“ရှမ်း ကြိုးတပ် တူရိယာတွေပါ”
တာချီလိတ်တွင်ရှိသော ရှမ်း(သျှမ်း)လူမျိုးတို့၏ အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းပြီးပါပြီ။
ရှမ်း ဓါး| ရှေးရှမ်းနယ်များ | ယနေ့ ရှမ်းပြည်နယ် | ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု | ရှမ်း အိုးစည်(အတို)
ရှမ်း ကြိုးတပ် တူရိယာတွေပါ | ရှမ်း အိုးစည် နှင့် ရှမ်း ခမောက် | နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပေါ်ပေါက်လာပုံ | နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပေါ်ပေါက်လာပုံ |
ရှမ်းသမိုင်း[www.shanhistory.com] နှင့် ၀ိကီမြန်မာ[http://wikimyanmar.co.cc]တို့မှ ရှမ်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များစွာကို ကူးယူကောက်နုတ် ကိုးကားဖော်ပြထားပါသည်။
ရှမ်းသမိုင်း၊ ရှမ်းအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုပါက ရှမ်းသမိုင်း[www.shanhistory.com]တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။